विश्वासको मतको प्रक्रिया यसरी अघि बढ्छ संसदमा !
10th May, 2021 Mon ०९:५२:०९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका हुन । विश्वासको मतका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा कोरोना संक्रमित सांसदहरुलाई समेत सहजै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल २ सय ५ जना सांसदले मात्र पीसीआर परीक्षण गराएका छन् । सांसदहरूलाई पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षण गर्न बाँकी कतिपय सांसद संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार, कम्तीमा ३० जना सांसद संक्रमित भइसकेका छन् ।
आजको बैठकमा मतदानअघि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुको मन्तव्य समेत राखिएको छ । मन्तव्यका लागि २ घण्टा समय विभाजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।
सम्बोधनका लागि सांसदहरुलाई समय निर्धारण गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीका लागि समयको बन्देज हुने छैन ।
कोभिड संक्रमण फैलिएका बेला लामो समय हलमा बस्न उचित नभएकाले प्रक्रिया एकै दिन टुंग्याउने सहमति भएको हो । ‘कोभिड विज्ञहरूका अनुसार समूहगत रूपमा लामो समय एउटै हलमा बस्न नहुने भएकाले पनि छोट्याउन खोजिएको हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
पत्र पढेपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदहरूको नामावली पढेर सुनाउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्तव्यसहित विश्वासको मत लिने प्रायेजनको प्रस्ताव टेबुल गर्न समय दिनेछन् । ओलीले आफूले विश्वासको मत लिनुपर्नाको कारणसहित मन्तव्य राख्नेछन् । उनको मन्तव्य सकिएपछि दलीय आधारमा निर्धारण गरिएको समयअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समयसीमा नतोक्ने परम्परा छ । उनीहरूको मन्तव्य सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिउत्तर दिनेछन् । प्रतिउत्तर सकिएपछि सभामुखले विश्वासको मत लिने प्रयोजनअन्तर्गत मत विभाजनको कार्यक्रम घोषणा गर्नेछन् । मत विभाजनका लागि सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । हस्ताक्षर गर्ने रजिस्ट्ररमा हुन्छ वा हुन्न र मत दिन्न भन्ने तीन किसिमको व्यहोराको कोलम राखिएको हुन्छ । सांसदहरूले आफूले चाहेको कोलममा हस्ताक्षर गर्न पाउनेछन् ।
हस्ताक्षरपछि मतगणना गरेर सभामुखले परिणाम घोषणा गर्नेछन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि मात्र अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था भने संविधानमा उल्लेख छैन । बजेट अधिवेशन बोलाउने समयमा विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बोलाइएको हो ।
उपेन्द्र यादव भन्छन्– मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई षड्यंत्र गरी ओझेलमा पारियो
एमाले महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री चितवनमा, अध्यक्ष दाहाल किन गएनन् ?
मिलेसम्म पार्टीका सबै पदबाट बिदा लिएर बस्न पाए हुन्थ्यो: उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य